Posted by Tranquillus | Sep 5, 2020 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Te hamorona na handray orinasa ve ianao, na SAS io, na SASU, na SARL na hafa, raha mitazona ny asanao ankehitriny? Mariho fa ny mpiasa rehetra dia manan-jo hiala sasatra amin'ny famoronana na fananganana orinasa. Ho fanampin'izay, ny fepetra sasany dia tsy maintsy raisina. Ireto misy fombafomba tokony harahina amin'ny fangatahana fialan-tsasatra amin'ny fananganana na handraisana orinasa iray. Homena anao koa ny taratasy fangatahana modely.
Ahoana ny fomba hirosoana amin'ny fangatahana fialan-tsasatra karama ho an'ny famoronana orinasa?
Rehefa miasa amin'ny orinasa ianao dia mety manana drafitra hananganana orinasa. Na izany aza, mila fotoana malalaka ianao. Ny tiana holazaina dia hoe tsy te hiala amin'ny asanao ianao izao fa mila fotoana hamitana ny tetikasanao. Fantaro amin'izay fa ny mpiasa rehetra dia mahazo tombony amin'ny fialan-tsasatra mba hamoronana orinasa.
Mifanaraka amin'ny lahatsoratra, L3142-105 ny fehezan-dalàna momba ny asa novaina tamin'ny andininy faha-9 amin'ny lalàna n ° 2016-1088, tamin'ny 8 Aogositra 2016, azonao atao ny mangataka fialan-tsasatra amin'ny mpampiasa anao. Ho fanampin'izay, ny fangatahanao dia iharan'ny fepetra sasany.
Mba hahazoana tombony amin'ity fialan-tsasatra ity dia mila manana zokiolona 2 taona ianao amin'ny orinasa iray na amin'ny vondrona iray ihany fa tsy nahazo tombony tamin'izany nandritra izay 3 taona lasa izay. Tokony hanana toy ny tetikasa ihany koa ianao famoronana orinasa iray izay tsy mifaninana amin'ilay iasanao ankehitriny.
Na izany aza, azonao atao ny mamaritra nyny fialan-tsasatra ilainao raha tsy mihoatra ny 1 taona izany. Azonao atao koa ny manavao azy mandritra ny herintaona. Na izany aza, tsy hahazo karama intsony ianao mandritra io fotoana io, raha tsy nisafidy ny hiasa tapa-potoana ianao. Izany dia milaza fa afaka mangataka enta-mavesatra amin'ny fifandanjana fialan-tsasatrao ianao.
HAMAKY Manomàna hafatra tsy misy alalana ho an'ny fialan-tsasatra
Raha mangataka fialan-tsasatra amin'ny fananganana orinasa na fananganana orinasa na hanatsorana ny CCRE, dia mila mampandre ny mpampiasa anao farafahakeliny 2 volana alohan'ny datin'ny fialanao fialan-tsasatra ianao, fa aza adino ny manonona ny faharetany. Mariho anefa fa ny fe-potoana sy ny fepetra ahazoana ny fialan-tsasatrao dia voafaritry ny fifanarahana iraisan'ny orinasa.
Mba hahazoana ny CEMR dia mila manoratra taratasy ianao mangataka fialan-tsasatra amin'ny famoronana orinasa. Avy eo dia tsy maintsy alefanao any amin'ny mpampiasa anao izany amin'ny alàlan'ny paositra mampiasa taratasy voasoratra anarana miaraka amin'ny fanekena ny fahazoana azy, na amin'ny mailaka. Ny taratasinao avy eo dia hilaza ny antony marim-pototra nangatahinao, ny daty nialanao fialan-tsasatra ary koa ny faharetany.
Raha vantany vao mahazo ny fangatahanao ny mpampiasa anao dia manana 30 andro izy ireo hamaly sy hampandre anao. Na izany aza, azony atao ny mandà ny fangatahanao raha tsy nahatanteraka ny fepetra ilaina ianao. Ny fandavana dia mety hitranga koa raha misy vokany eo amin'ny fampandrosoana ny orinasa ny fialanao. Amin'ity tranga ity dia manana 15 andro aorian'ny nahazoanao ny fandavana hametraka fitoriana any amin'ny tribonaly indostrialy raha tsy ekenao ity fanapahan-kevitra ity.
Ankoatr'izay, raha manaiky ny fangatahanao ny mpampiasa anao, dia tsy maintsy ampahafantariny anao ny fifanarahana nataony tao anatin'ny 30 andro nahazoany. Mihoatra an'io fe-potoana io ary raha tsy misy fisehoan'ny mpampiasa anao, dia horaisina ny fangatahanao. Na izany aza, ny fiainganao dia azo ahemotra mandritra ny 6 volana farafahakeliny aorian'ny datin'ny fangatahanao fiaingana. Izy io dia indrindra amin'ny tranga izay anaovana ity amin'ny vanim-potoana mitovy amin'ny an'ny mpiasa hafa. Noraisina io fomba fanao io mba hiantohana ny fandehan'ny asa aman-draharaha.
HAMAKY Ampiasao tsara amin'ny mailaka ny CCI
Ahoana ny aorian'ny fialan-tsasatra?
Voalohany, azonao atao ny misafidy ny famaranana ny fifanarahana asa sa ny fanohizana ny asa. Araka izany dia tsy maintsy ampandrenesinao amin'ny mpampiasa anao ny fanirianao hiverina miasa farafahakeliny 3 volana alohan'ny faran'ny fialan-tsasatra. Ho an'ny tranga voalohany dia azonao atao ny manafoana ny fifanarahana tsy misy fampandrenesana, fa amin'ny alàlan'ny fahazoana onitra hisolo ny fampandrenesana
Raha toa ka nifidy ny hanohy hiasa ao amin'ny orinasa ianao dia afaka miverina amin'ny toerana taloha na toerana mitovy amin'izany raha ilaina. Ny tombotsoanao noho izany dia hitovy amin'ny alohan'ny fialanao fialan-tsasatra. Azonao atao koa ny mandray soa amin'ny fiofanana hanarenana ny tenanao raha ilaina izany.
Ahoana ny fomba fanoratana taratasy fialantsasatra ho an'ny famoronana orinasa?
Ny fangatahana CEMR dia tsy maintsy milaza ny datin'ny fiainganao, ny faharetan'ny fialanao ary ny toetran'ny tetikasanao. Azonao atao noho izany ny mampiasa ireto maodely manaraka ireto ho an'ny fangatahana fialan-tsasatra sy ny fiverenana miasa.
Ho an'ny fangatahana CEMR
Lohahevitra: Fangatahana fialan-tsasatra amin'ny fialantsasatra ho an'ny famoronana orinasa
Amin'ny maha mpiasa anao ao amin'ny orinasanao, hatramin'ny [daty], dia mitana ny toeran'ny [toeranao] aho izao. Na izany aza, mifanaraka amin'ny Article L. 3142-105 amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa frantsay dia tiako ny mahazo tombony amin'ny fialan-tsasatra ho an'ny famoronana orinasa, ny hetsika dia hiorina amin'ny [mamaritra ny tetikasanao].
Noho izany dia tsy eo aho amin'ny [datin'ny fiainganana] ka hatramin'ny [datin'ny fiverenana], ka mandritra ny vanim-potoana [farito ny isan'ny andro tsy ihaviako], raha avelanao izany.
Miandry ny fanapahan-kevitra avy aminao dia raiso azafady, Ramatoa, Tompoko, ny antoka omena ahy indrindra.
Raha misy fangatahana miverina
Lohahevitra: Fangatahana famerenana amin'ny laoniny
Miala sasatra aho izao hanangana orinasa hatramin'ny [daty fiaingana].
Izao dia ampahafantariko anao ny faniriako hamerina ny asako taloha ao amin'ny orinasanao, izay nahazoan-dàlana ao amin'ny lahatsoratra L. 3142-85 ao amin'ny fehezan-dalàna momba ny asa. Raha tsy eo intsony anefa ny toerako dia te hanana toerana mitovy amin'izany aho.
Ny fiafaran'ny fialan-tsasatra amiko dia voalahatra ho amin'ny [daty fiverenana] ary noho izany dia hanatrika aho manomboka amin'io andro io.
Raiso azafady, Ramatoa, Tompoko, amin'ny toky omena ahy indrindra.
HAMAKY Ampitomboy ny mailakao matihanina amin'ny fomba fahalalam-pomba voarindra tsara
Sintomy ny "For-a-request-from-CCRE-1.docx"	Pour-une-demande-de-CCRE-1.docx - Notsongaina in-2636 - 13 Kb
Sintomy ny "in-the-case-of-a-recovery-request-1.docx"	In-the-case-of-a-recovery-request-1.docx - Notsongaina in-2606 - 13 Kb
Miala amin'ny fanombohana orinasa, modely taratasy fangatahana maimaim-poana January 8th, 2022Tranquillus
Teo alohaKaonty fanofanana manokana: ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao
manarakaMamolavola taratasy fangatahana fahazoana mivezivezy an-tsitrapo